Barcelona Oo Guul Ka Gaartay Man United, Neymar Oo Shabaqa Gaaray | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Barcelona Oo Guul Ka Gaartay Man United, Neymar Oo Shabaqa Gaaray
Barcelona ayaa guul weyn ka gaartay dhigeeda Manchester United kulan ka tirsan koobka ICC ee ka socda dalka mareykanka, Neymar Jr ayaana dhaliyay goolka ay guushii labaad ee tartanka ku heeleen wiilasha Ernesto Valverde.
Inkastoo goolka uu ahaa qalad uu galay Antonio Valenia hadana Red Devils waxey ku mahdineysaa inuu goolka ugu jiray David De Gea qeybtii hore ciyaarta kaas oo badbaadiyay tiro goolal cajiib ah oo shabaqiisa laga soo qaban lahaa.
Romelu Lukaku ayaa helay fursadii ugu horeysay ee ciyaarta inkastoo uusan goosha ku aadin hadana diilinta 6-aad ayaa kubad joog dhexe aheyd loo dhigay mana ka faa’ideysan.
Luis Suarez ayaa kubad lasoo galay xerada ganaaxa, balse kubadii uu goolka aadiyay waxaa si cajiib leh u badbaadiyay De Gea.
Lionel Messi ayaa laba jeer oo xiriir ah fursado ku helay United balse mid ka mid ah waxaa u diiday inuu shabaqa gaarsiiyo De Gea markii uu kubad ka tuuray xerada ganaaxa dhexdeeda.
Paul Pogba ayaa tijaabiyay goolka Barcelona markii uu kubad ka tuuray meel dhawr talaabo u jirta diilitna 18-aad, balse Cillessen ayaa ka badbaadiyay.
Marcus Rashford ayaa helay fursad uu gool ugu dhaliyo koodiisa markii uu dhinaca midig ka galay xerada ganaaxa, balse kubadii uu goolka aadiyay Cillessen ayaa iska saaray.
GOAL Neymar Junior ayaa hogaanka u dhiibay Barcelona markii uu si fudud ku helay kubad uu la kufay Antonio Valencia, xiddiga reer Brazil si fudud ayuu u dhameystiray, wuxuuna u ahaa goolkii sadexaad ee Barcelona kulamada fasaxa.
Luis Suarez ayaa isku dayay inuu dhaliyo qalaama-rogaal cejiib ah dhamaadkii qeybta hore ciyaarta balse De Gea ayaa u diiday kaas oo noqday badbaadiyaha Red Devils kulankii xalay.
Anthony Martial ayaa si fiican isugu dayay qeybtii dambe inuu gool u dhaliyo Manchester United, balse uma suuragalin iyadoo qeybtii dambe ay aheyd mid aan u xamaasad badneyn sidii qeybtii hore madama laga saaray dhamaan xidigahii ugu muhiimsanaa ciyaarta.
Si kastaba Barcelona waxey gaartay guushii labaad iyadoo maalmo ka hor 2-1 ku dubatay Juventus, kaliya 6-dhibcood ayeyna ku hogaamineysaa tartanka qeybtiisa waqooyiga America iyadoo ciyaarta 2-kulan halka Juventus ay leedahay 5-dhibcood oo qura.